Nri | October 2021
Isi > Nri
Ego ole bụ strava - chọọ ihe ngwọta
Ọ bara uru ịkwụ ụgwọ maka strava? Mbịambịa, Sumva Summit gosipụtara nnọọ na ọ bara uru. Ugbu a amaara m ihe ndị anaghị etinye na ụdị ọkọlọtọ, echeghị m na m nwere ike ịhapụ ndenye aha m. Ihe kachasị m mma bụ ihe omume adaba, ndekọ ọzụzụ na GAP.
strava ndụ agba
Strava ndụ agba - ihe ngwọta
Ndi mmadu ebi ndu strava na aru oru maka igba oso? Họrọ Agba Live Agba dị naanị maka na-agba ọsọ na ịnya ihe. A ga-eji ụdị ngalaba abụọ rụọ ọrụ n'oge ahụmịhe nke ndụ gị: ndị a ma ama ma maa ama. 24. 2021.
strava obi ọnụego nyochaa
Strava heart rate nyochaa - azịza ohuru
Kedu ndị na - enyocha obi na - arụ ọrụ na strava? Strava dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ GPS nke na-edekọ data ọnụọgụ obi, gụnyere Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, na Suunto, na TomTom.17 2021.
strava free ikpe
Strava ikpe ikpe n'efu - nzaghachi maka okwu a
Ogologo oge ole ka ikpe ikpe na - enweghị n'efu? ruo ụbọchị 60
nri ndị agha
Ndị agha Strava - ihe ngwọta dị irè
Ndị agha nwere ike iji Strava? Strava heatmap na-egosiputa ọrụ ndị ọrụ na-arụ ọrụ ruo ọtụtụ afọ site na Septemba 2017. Nke ahụ pụtara na ọ nweghị onye nwere ike iji ya soro ndị ọrụ agha ma ọ bụ ndị nyocha na-agagharị na ntọala CIA na oge.
strava chọta ụzọ gasị
Strava chọta ụzọ gasị - pragmatic solutions
Kedu ka m ga esi enyocha ụzọ na desktọọpụ strava? Ọzọ, mepee Strava wee pịa bọtịnụ 'Chọpụta' na ala, wee pịa 'rezọ'zọ'. Nke ahụ ga-emepe ihu nke ga - ebido ịtụgharị uche na ndụ na obere sekọnd, na - egosi gị ile ụwa anya. Sekọnd ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, ọ ga-alaghachi na ụzọ atọ, dabere na ndabara ndenye na elu nke ibe. 23.03.2020
strava okpomoku okpomọkụ map
Strava global okpomọkụ map - ihe ngwọta bara uru
Gịnị bụ Heatmap zuru ụwa ọnụ na Strava? The Global Heatmap Igwe okpomoku a na-egosi 'okpomoku' nke ndi agwuputara, ihe ndi mmadu mere na afo gara aga. A na-emelite okpomoku ahụ kwa ọnwa. Arụ ọrụ nke ndị na-eme egwuregwu na-egosi dị ka nke nzuzo adịghị ahụ anya. Ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịpụ site na imelite ntọala nzuzo ha. Mpaghara ndị anaghị arụ ọrụ pere mpe nwere ike ọgaghị egosi 'okpomoku' ọ bụla.
otele ziri ezi
Lee ka o si bụrụ eziokwu strava - chọọ ihe ngwọta
Gini mere strava ji adighi nma? Ngwaọrụ gị nwere ike tufuru njikọ GPS satịlaịtị ma edekọghị data ọ bụla. Ọrụ Strava gị nwere ike na-efu map, gosi usoro kwụ ọtọ jikọtara mmalite na njedebe gị ma ọ bụ jiri akpado akpado dị ka ọrụ ime ụlọ. Ngwaọrụ gị nwere ike idetu isi ihe GPS nke si n'ụzọ gị pụọ. 24. 2021.
strava mpaghara akụkọ na-emeghị
Akụkọ akụkọ ọdịnala Strava - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe ọ pụtara ịbụ akụkọ ọdịnala na Strava? A na-enye onye mmeri na-eme egwuregwu Legend (LCL) nke na-emecha otu akụkụ kachasị maka oge 90 na-agagharị n'agbanyeghị agbanyeghị ma ọ bụ ọsọ.
Maapụ Strava - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Strava enwere maapụ? Strava na-enye maapụ abụọ maka ilele ihe ị na-eme na weebụsaịtị Strava: Standard na Satellite. Ihe onyonyo Satellite sitere na DigitalGlobe, NASA, na Mapbox. Maapụ mmekọrịta na ngwa ngwa Strava jiri Google Maps na Apple Maps maka ngwa gam akporo na iOS. 8 2021.
atụmatụ kachasị mkpa
Atụmatụ Strava nke kachasị - azịza na ajụjụ
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti strava free na adịchaghị? Strava nwere mbipute a na - akwụghị ụgwọ na nke akwụrụ ụgwọ, Strava Summit, na - enye gị ohere ị nweta atụmatụ ndị ọzọ. Summit Sumva na-efu $ 5.00 kwa ọnwa, ma ọ bụ $ 59.99 kwa afọ. Freedị n'efu nke Strava na-enye nsuso mmemme, ndepụta mgbasa ozi mmekọrịta, ikike ịchọta ihe omume ahụike mpaghara, na ndị ọzọ. 1. 2020.
strava dakọtara ngwaọrụ
Ngwaọrụ Strava dakọtara - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ngwa gakọrịta na strava? Na-ebugote ma ọ bụ syncing site na saịtị ahụike ndị ọzọ na StravaGarmin Connect.MapMyRun.MapMyRide.Runkeeper.3
Strava ọdịiche - ihe ngwọta bara uru
Gini mere Gap na Strava? STRAVA yiri ka ewepụla atụmatụ ọzọ maka ndị ọrụ anaghị akwụ ụgwọ n'ihi na o doro anya na ọ na-eme ka ọtụtụ n'ime anyị nwee ike ịkwado ọrụ STRAVA na-efu efu. 2020.
strava ịrị otu
Strava ịrị otu - otu esi enweta ya
Kedu ụdị ugwu? Nkeji 4: Crịgo nke 250 ruo 500 ụkwụ na uru elu. na uru elu.
ọrụ Flava Flag
Ọrụ Flava Flag - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe ga - eme mgbe ịkọtara ọrụ strava? Ọ bụrụ na etinyere ọrụ gị ọ pụtara na a matala ọrụ gị dị ka nke nwere ike ịda iwu ntuziaka nke ndu ngalaba site na nchọpụta akpaaka ma ọ bụ onye ọzọ na-agba ọsọ Strava. Flag omume ga-egosi na nke leaderboards.28. 2021.
strava onye okpomoku
Strava onwe onye okpomoku - olee otu anyi si edozi
Kedu ihe bụ okpomoku strava?
Strava hashtags - akwụkwọ ọgụgụ zuru ezu
Ndi hashtags na-arụ ọrụ na Strava? To ga-enwe ndidi. N'adịghị ka ndị ọzọ na-elekọta mmadụ mgbasa ozi, na Strava, ị nweghị ike hashtag ma nwee olile anya maka ọtụtụ ndị na-eso ụzọ; enweghị Strava-bots si ebe ahụ.
onye ndu nri
Onye ndu Strava - otu esi emeso
Kedu ka m si ahụ ndị isi na Strava? Site na ibe ihe omume, pịgharịa gaa na nke gara aga na map iji chọta akụkụ ndị dabara na ọrụ ahụ. Họrọ ngalaba iji hụ na isi ngalaba ahụ. Isi ihe edere site na afọ na ibu dị na ala nke ihuenyo a. 5 2021.
Strava vs mapmyride - otu esi edozi ya
Enwere m ike iji Strava na MapMyRide n'otu oge? Iji nyefee ihe omume gị site na MapMyRide gaa Strava, ị ga-ebupụ ọrụ ọ bụla site na MapMyRide ma bulite ha na Strava site na ibe nnabata anyị. Gaa na mmemme na MapMyRide. IHE: faịlụ nwere ike buru nnukwu bulite na Strava n'otu ìgwè ruo 25.
ụzọ ụkwụ strava
Vazọ ụkwụ Strava - otu esi eme ihe
Kedu nke kacha mma Strava ma ọ bụ Komoot? Onye na-eme egwuregwu na-achọ iji onwe ya atụnyere ndị ọzọ na onye na-achọ asọmpi, ọ kaara ya mma na Strava. A na-eji Komoot maka mgbanwe na obodo na maka mmụọ nsọ mgbe ị na-eme atụmatụ ụzọ